China Disposable Medical Protective PVC လက်အိတ်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူများ | Hemeikaineng
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလက်အိတ်များသည် PVC ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောလက်အိတ်အမျိုးမျိုးဖြစ်သည်။ PVC အပေါ်ယံလွှာသည်ပြင်းထန်သောခွန်အားနှင့်ထိုးဖောက်ခံနိုင်မှုတို့ကြောင့်သွေးမှရောဂါပိုးများနှင့်အခြားကိုယ်ခန္ဓာအရည်များမှအပိုကာကွယ်မှုပေးသည်။ သူတို့ဟာအစေးမပါတဲ့အပြင်အထိခိုက်မခံတဲ့အသားအရေရှိသူတွေအတွက်လည်းသူတို့ကိုပြီးပြည့်စုံအောင်ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ ဤ PVC လက်အိတ်အမျိုးအစားများကိုအခြားသူများနှင့်ခွဲခြားသည်မှာ၎င်းတို့သည်အပ်နှင့်အခြားချောသောတူရိယာများနှင့်အလုပ်လုပ်ရန်လက်ချောင်းထိပ်ဖျားထိတွေ့မှုကိုအလွန်ပါးလွှာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ထုတ်ကုန်: တစ်ခါသုံးဆေးဘက်ဆိုင်ရာ PVC လက်အိတ်
ထုပ်ပိုးအသေးစိတ်: 100pcs / box ကို, 10boxes / ပုံး
ပုံးအရွယ်အစား: 32 * 28 * 26cm
လျှောက်လွှာ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးပြုရန်, ခွဲစိတ်မဟုတ်
၁။ Latex အခမဲ့ဖော်စပ်နိုင်မှု၊ သဘာဝရော်ဘာပရိုတင်းမျှမရှိပါ။
2. ဓာတု accelerator အခမဲ့။ Carbamates, Thiazoles နှင့် Thiurams မပါ ၀ င်ပါ။
လွယ်ကူသောဝတ်ဆင်ရန်အတွက်အတွင်းရှိ PU ဖုံးအုပ်ထားသည်။
၁။ ကုန်ပစ္စည်းများသည် CE၊ ISO အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုကျော်လွန်ပြီးဖြစ်သည်။
3. OEM / ODM ။
ရှေ့သို့ Disposable Nitrile စက်မှုအဆင့်လက်အိတ်များ